Iindaba zesiXhosa, 12 eyoKwindlwa 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 12 eyoKwindlwa 2019
Written by Ashia Nkontsa on 12/03/2019
Ubanjiwe owasethyini ofunyanwe neziyobisi
Zikhokelele ekubanjweni kowasetyhini oneminyaka engamashumi amane anesibini ubudala iinzame zamapolisa zokuqubisana norhwebo lweziyobisi kweli phondo leNtshona Koloni. Lo wasetyhini ubanjwe nentsangu ezikhilogram ezilikhulu elinamashumi amabini anesihlanu eKrraifontein. Amapolisa ebeqhubeka nohlolo lawo lemihla ngemihla malunga nentsimbi yesibini ngentseni yanamhlanje ngethuba eqaphela isithuthi sohlobo lweHyundai IX35 ekrokrelekayo aza athabathis’ekhondweni layo wade umqhubi wayishiya endleleni. Emva kophando amfumene lo mqhubi kwindlu ekwisitalato i-Nkani eWallacedene aza aqhuba ugqogqo oluqandusele ekufunyanweni kweengxowa zentsangu ezixabisa ngaphezu kwamawaka angamashumi amathandathu eerandi.
uPhanyaza Lesufi ugxininise unyanzeliso mthetho ezikolweni
Umphathiswa wezemfundo kwiphondo leGauteng umnumzana Panyaza Lesufi uthi iiarhente zonyanzeliso-mthetho mazithabathe amanyathelo ngakubafundi abaqwabaza umthetho.ULesufi utyelele isikolo samabanga aphakamileyo eCrystal Park eBenoni izolo emva kokuba umfundi ehlaselwe ligquba lamantombazana afunda kwakwesi sikolo. Umphathiswa ubonise ushicilelo lwe-video apho le ntwazana ibethelwa ugqirha nezicaka ngamanye amantombazana. Ukanti kubanjwe abafundi abahlani phantsi kwezityholo zohlaselo ngeenjongo zokwenzakalisa ngokumasikizi baza bakhululelwa phantsi kweliso labazali lo gama benqunyanyisiwe esikolweni.
Ziyaqhuba iingxoxo zikarhulumente noosomashishini abathile
Zizakuqhubeka namhlanje iingxoxo malunga nokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente weli lizwe ngoosomashishini abathile. Le komishoni izakuqhubeka nokuva ubungqina obayamene no-Eskom balowo wayesakuba ngumanejala ojongene nentengo yamafutha umnumzana Johann Bester kwakunye nentloko yezorhulumento kwa-Standard Bank umnumzana Ian Sinton ndawonye nomnumzana Piers Marsden womgodi wamalahle i-Optimum.
Liyaqhuba ityala lendoda ethyolwa ngokubulala umfazi wayo
Lingena kusuku lwesibini namhlanje uvavanyo lwetyala lendoda etyholwa ngokugqithis’amafu inkosikazi yayo nalapho kulindeleke ukuba umbuso ubize ingqina lesithathu. Izolo inkundla ephakamileyo yephondo leNtshona Koloni ive amangqina amabini ethetha malunga nosuku lokunyamalala kukaGill Packham owayeyinkosikazi kaRob Packham ngenyanga yoMdumba kunyaka ophelileyo. Umzimba wakhe wafunyanwa kwisithuthi sakhe esitshileyo ze kwabekwa ityala lokubulala nokujijisana nengalo yomthetho phezu kwentloko yomyeni wakhe. Intombi kaGill Packham ithi Rob noGill Packham babeye kuphululo lomphefumlo labatshati ngosuku olwandulela ukuduka kwakhe. uNicola Packham uthi ingxoxo yayimalunga neqabane labucala likayise nalapho wavumayo ukuba ukholwa ngamandla lilo nto leyo eyamkhathaza ngamandla unina.
i-EFF izimisele ukuthabatha ulawulo kwi ANC
Iqela le-Economic Freedom Fighters lithi lizimisele ukuthabatha ulawulo kwi-ANC kumaphondo amathathu njengenxalenye yokwehlisa amanani eevoti zeANC zibe ngaphantsi kwamashumi amahlanu ekhulwini kuzwelonke kulonyulo jikelele lwangomhla wesibhozo kwinyanga kaCanzibe. Eli qela lithi kwiveki ephelileyo liwuqinisile umkhankaso walo eMntlaNtshona eGauteng naseLimpopo kwaye kubonakala ngathi linganakho ukuthabatha amanani avisayo abalandeli. EMtlaNtshona i-ANC ithiwe mbende ziingxwabangxwaba zangaphakathi kwaye i-EFF iliqela eliphambili kwaphikisayo kananjalo kuzakubakho ujijiswano olumandla ngeGauteng. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Sello Malema ebetyelele eLimpopo kwiiveki ezimbini eziphelileyo esiya kukhankasa.
u-Dlodlo ujamelene nesigwebo
Umphathiswa weenkonzo zikarhulumente nolawulo unkosazana Ayanda Dlodlo uthi uyasamkela isigqibo sekomiti ejongene nendlela yokuziphatha yamalungu epalamente sokumswantsulisa malunga nokuqwabaza kwakhe umthetho ngokufeda ukubika ukuhlala kwakhe kwihotele yeengcungcu eDubai. Oku kuza emva kwesikhalazo esifakwe ngunkosazana Phumzile van Damme weDA sokuba uDlodlo akazange adize ukuba wahlawulelwa ehotele kanokutsho i-Oberoi eDubai ngusomashishini umnumzana Fana Hlongwane phof’abe ebhaliselwe yinkampani yakwaGupta. UDlodlo ujamelene nesigwebo esizakuwiswa yindlu yowiso-mthetho kwaye uthi usebenzisene ngokupheleleyo nekomiti.